टाइटेनियम तथ्य - तत्वहरूको आवधिक तालिका
विज्ञान आवधिक तालिका
टाइटेनियम रासायनिक र शारीरिक गुण
टाइटेनियम मानव प्रत्यारोपण, विमान, र धेरै अन्य उत्पादनहरूमा प्रयोग गरिएको एक बलियो धातु हो। यहाँ यस उपयोगी तत्वको बारे तथ्यहरू छन्:
टाइटेनियम मूल तथ्य
टाइटेनियम परमाणु संख्या : 22
परमाणु वजन : 47.88
अन्वेषण: विलियम ग्रेगोर 17 19(इङ्गल्याण्ड)
इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन : [एआर] 4s23 डी 2
शब्द उत्पत्ति: लैटिन टाइटेन: मिथ्या विज्ञान मा, पृथ्वी को पहिलो पुत्र
आइसोटोज : टाइटेनियमको 26 ज्ञात एकोहोरोहरू टा-38 देखि टाई -63सम्म छन्।
टाइटेनियमसँग परमाणु जन 46-50 संग पाँच स्थिर आइसोटोज छ। सबै प्रचलित आटोटप Ti-48 हो, सबै प्राकृतिक टाइटेनियम को 73.8% को लागि लेखांकन।
गुणहरू: टाइटेनियममा 1660 +/- 10 डिग्री सेल्सियस, प्वाइंट ट्वाइन्ट 3287 डिग्री सेल्सियस, 4.54 को विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण,2, 3, वा4को भित्री बिन्दुमा पाइन्छ। उच्च शक्ति, र उच्च जंग प्रतिरोध। यो सल्फरिक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड , नम क्लोरीन ग्याँस , सबै कार्बनिक एसिड, र क्लोराइड समाधानहरू कमजोर गर्न प्रतिरोधी हुन्छ। टाइटनियम मात्र नुलीला हुन्छ जब यो ओक्सीजनबाट मुक्त हुन्छ। टाइटेनियम हवामा जलाइन्छ र नाइट्रोजनमा जलाउने मात्र तत्व हो। टाइटेनियम dimorphic छ, हेक्सागोनल एक फारम को साथ धीरे - धीरे 880 डिग्री सेल्सियस को आसपास क्यूबिक रूप मा बदल। धातुले रातो तापक्रममा ओक्सीजनसँग मिल्दछ र क्लोरीनसँग 550 डिग्री सेल्सियसमा। टाइटेनियम इस्पातको रूपमा बलियो छ, तर यो 45% लाइटर हुन्छ। धातु एल्युमिनियम भन्दा 60% भारी छ, तर यो दुई पटक बलियो छ।
टाइटेनियम धातुलाई शारीरिक रूपले इन्टरनेट भनिन्छ। शुद्ध टाइटेनियम डाइऑक्साइड उचित रूपमा स्पष्ट छ, प्रशोधनको अत्यन्तै उच्च सूचकांक र हीरा भन्दा उच्च ओप्टिकल फैलावटको साथ। प्राकृतिक टाइटेनियम ड्यूरान्सन संग बमबारी मा अत्यधिक रेडियोधर्म हुन्छ।
प्रयोग गर्दछ: टाइटेनियम एल्यूमीनियम, मोलिब्डेनम, फलाम, म्यांगनीज र अन्य धातुहरु संग मिश्र धातु को लागि महत्वपूर्ण छ।
टाइटेनियम मिश्र धातुहरू प्रयोगमा प्रयोग गरिएका छन् जहाँ हल्का शक्ति र तापमान चरमहरू सामना गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ (जस्तै, एयरोस्पेस अनुप्रयोगहरू)। टाइटेनियम प्रयोग गर्न सकिने बिरुवामा बिरुवाहरू। धातु प्रायः घटकका लागि प्रयोग गरिन्छ जुन समुद्री जलमा पर्न सकिन्छ। प्लैटिनम संग लेपित टाइटेनियम anode समुद्री जल देखि कैथोडिक जंग संरक्षण को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनभने यो शरीरमा अशुद्ध छ, टाइटेनियम धातुमा सर्जिकल अनुप्रयोगहरू छन्। मानव निर्मित मेमोरी बनाउन टाइटेनियम डाइअक्साइड प्रयोग गरिन्छ, यद्यपि परिणामकारी पत्थर अपेक्षाकृत नरम छ। स्टार नीलमणि र रूबीहरूको तारांकन TiO2को हालको परिणाम हो। टाइटेनियम डाइअक्साइडमा घरको चित्र र कलाकार पेंटमा प्रयोग गरिन्छ। यो रंग स्थायी छ र राम्रो कवरेज प्रदान गर्दछ। यो अवरक्त विकिरणको एक उत्कृष्ट प्रतिबिम्ब हो। यो रंग सौर पर्यटकीय उपरीक्षणहरुमा पनि प्रयोग गरिन्छ। टाइटेनियम ओक्साइड पिगहरू तत्वको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगको लागि खाता बनाउँछ। टाइटेनियम अक्साइड प्रकाश को फैलाने को केहि प्रसाधन सामाग्री मा प्रयोग गरिन्छ। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड गिलासलाई उडाउन प्रयोग गरिन्छ। यौगिक हवामा दृढतापूर्वक झल्काउँछ किनकि धुम्रपान स्क्रिन उत्पादन गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ।
स्रोत: टाइटेनियम पृथ्वीको क्रस्टमा 9ौं सबैभन्दा धेरै प्रचुर तत्व हो। यो लगभग सधैँ अन्धकारमा चट्टानहरूमा पाइन्छ।
यो rutile, ilmenite, sphen, र धेरै फलाम अयस्क र titanates मा हुन्छ। टाइटेनियम कोइलाला कोश, बिरुवाहरू, र मानव शरीरमा पाइन्छ। टाइटेनियम सूर्यमा र मेसेरीहरूमा पाइन्छ। अपोलो 17 मिशनबाट चन्द्रमा चट्टानले 12.1% TiO2सम्म समावेश गरेको थियो। अघिल्लो मिशनको चट्टानले टाइटेनियम डाइअक्साइडको कम प्रतिशत देखाउँछ। टाइटेनियम ओक्साइड ब्यान्ड एम-प्रकारका सितारका स्पेक्ट्रामा देखाइन्छ। 1946 मा, कोलले थाहा पाए कि टाइटिनम को म्याग्नेशियम संग टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को कम गरेर व्यावसायिक रूप देखि उत्पादन गर्न सकिन्छ।
टाइटेनियम भौतिक डेटा
तत्व वर्गीकरण: संक्रमण धातु
घनत्व (जी / सीसी): 4.54
पिघ्ने प्वाइंट (के): 1933
उभर प्वाइंट (के): 3560
रूप: चमकदार, कालो भूरी धातु
परमाणु रेडियो (pm): 147
परमाणु मात्रा (सीसी / mol): 10.6
कोभेलेंट रेडियो (pm): 132
ईनिक रेडियो : 68 (+ 4e) 94 (+ 2e)
विशिष्ट ताप (@ 20 डिग्री CJ / g मोल): 0.523
फ्यूजन ताप (केजे / mol): 18.8
वाष्पकरण ताप (केजे / mol): 422.6
डेबी तापमान (K): 380.00
पॉलिंग नगरीता संख्या: 1.54
पहिलो आईओइजिङ इञ्जिन (केजे / मोल): 657.8
ओक्सीकरण राज्य : 4, 3
ल्याटिस संरचना: 1.588
ल्याटिस Constant (Å): 2.950
सीएएस रजिस्ट्री नम्बर : 7440-32-6
टाइटेनियम एक ब्ल्याक रेतमा खोजिएको थियो जो इलिमेनाइट भनिन्छ। Ilmenite आयरन ओक्साइड र टाइटेनियम ओक्साइड को एक मिश्रण हो।
विलियम ग्रिर्गले टाइटेनियम पत्ता लगाएपछि म्यानकन पार्सिको पास्ता थिए। उनले आफ्नो नयाँ मेटल 'मेनुकोन्टेन्ट' नाम दिए।
जर्मन रसायनज्ञ मार्टिन क्लाप्रोथले ग्रिर्गको नयाँ मेटललाई पुनर्स्थापित गर्यो र तीर्थ टाइटनम नामक टाइटनियमको नाम, ग्रीक पौराणिक प्राणीहरूको पृथ्वी पछि। नाम 'टाइटेनियम' को रूप मा प्राथमिकता दिइएको थियो र अंततः अन्य रसायनज्ञहरु द्वारा अपनाया तर मूल खोजकर्ता को रूप मा ग्रेगरी स्वीकार गरे।
सन् 1910 सम्म मैथ हनटर द्वारा शुद्ध टाइटेनियम धातु को खोज गरे पछि - 11 वर्ष पछि यसको खोज गरे।
सबै टाइटेनियम को लगभग 95% टाइटेनियम डाइअक्साइड, TiO2को उत्पादन मा प्रयोग गरिन्छ। टाइटेनियम डाइअक्साइड एक प्वाइन्ट, प्लास्टिक, टूथपेस्ट र कागजमा प्रयोग गरेको एक उज्ज्वल सेतो वर्णक हो।
टाइटेनियम मेडिकल प्रक्रियाहरूमा प्रयोग गरिन्छ किनभने यो गैर-विषैले र शरीरमा गैर प्रतिक्रियाशील छ।
सन्दर्भ: लस एलामोस नेशनल प्रयोगशाला (2001), क्रिसमस रासायनिक कम्पनी (2001), लेंज ह्यान्डबुक ऑफ रसायनशास्त्र (1952), रसायन र भौतिकीको सीआरसी पुस्तिका (18 औं संस्करण) अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी एनएसएसडीएफ डाटाबेस (अक्टोबर 2010)
प्रश्नोत्तरी: आफ्नो टाइटेनियम तथ्याङ्क ज्ञान परीक्षण गर्न तयार हुनुहुन्छ? टाइटेनियम तथ्य प्रश्नोत्तरी लिनुहोस्।
आवधिक तालिकामा फर्कनुहोस्
परमाणु संख्या5तत्व तथ्य
10 आकर्षक सुनको तथ्यहरू
10 क्याल्सियम तथ्य
आवधिक संख्या 1 आवधिक तालिकामा
यूरेनियम को आवधिक तालिका कहाँ छ?
सबैभन्दा धातुत्मक तत्व के हो?
रंग आवधिक तत्वहरुको तालिका - परमाणु जन
म्याकडोनाल्डको नौकरी आवेदन
श्रेणी र सामाजिक असमानता
शीर्ष .38 '80s को विशेष विशेष गीतहरु
रबर्ट सेन्जेस्टैका एबट: "शिकागो डिफेंडर" को प्रकाशक
सिद्धान्त (ईसाई) डिस्कवरी के हो?
स्पेनिस शब्द क्वेडर प्रयोग गर्दै
शीर्ष '80s गीत क्लासिक रक बैंड को संशोधित लाइनअप देखि हाँ
एलिस माइनेल द्वारा रेलवे साइड द्वारा
के डार्कमा रेडियोधर्मी तत्वहरू चमक गर्नुहोस्?
हराएको छैटौं र7औं मौसम 'स्टार वार्स: द क्लोन युद्ध'
मेपान को प्राचीन शहर
प्रभाव उपभोक्तावाद ग्लोबल वार्मिंग र जलवायु परिवर्तनमा छ
कसरी फ्रांसीसी शब्द 'डिस्कोवर' ('छलफल गर्न') लाई सङ्घर्ष गर्नुहोस्
अन्तरिम स्व-सरकारी व्यवस्थाका सिद्धान्तहरूको घोषणा
रेखाचित्रमा के लागू गरिएको रेखा के हो?
शुरुआती पियानो स्केलहरू प्रमुख कुञ्जीहरूमा
दलाई लामा को हुन्?
के म एक मसीही हुन सक्छु र अझै मजाक हुन सक्छु?
Chimborazo को बारे मा फास्ट तथ्य
Thich Nhat Hanh को जीवनी
चित्रा स्केटरहरूलाई मद्दत गर्न व्यायाम गर्नुहोस् स्पिनहरू बस्नुहोस्
एक सेलब्याट केन्द्रिय कसरी प्रयोग गर्ने
अलबामा विश्वविद्यालय Huntsville प्रवेश मा
प्रिय एबी पाठ योजना
फ्रान्सेली शब्दावली: मा होटल
युवा महिलाहरुको प्रमुख चैंपियन्स